मतगणनामा गम्भीर षडयन्त्र गर्न खोजियो भन्दै बालेन शाहले मध्यरातमा गुहारे निर्वाचन आयोग, अब के होला ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/मतगणनामा गम्भीर षडयन्त्र गर्न खोजियो भन्दै बालेन शाहले मध्यरातमा गुहारे निर्वाचन आयोग, अब के होला ?
काठमाडौं । मतगणनामा गम्भीर षडयन्त्र गर्न खोजियो भन्दै कामनपाका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले मध्यरातमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । काठमाडौंमा महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मतगणना प्रतिनिधि राख्नेबारे जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरेको व्यवस्थामा आपत्ति जनाएका हुन् । बालेनका अनुसार मतगणना गर्दा पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको एकजना प्रतिनिधि राख्न सकिने जानकारी निर्वाचन अधिकृतले गराएका छन् ।
‘सबै उम्मेदवार बराबर भनेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको निर्वाचन भएको छ । उम्मेदवारी दिने समय होस् वा शुल्क वा प्रक्रिया, कतै पनि पार्टीगत उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारको भिन्नता सोचिएको छैन,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,’हरेकलाई हरेकसँग प्रतिस्पर्धी मानिएको छ । हरेकले पाउने प्रत्येक मतको मतभार बराबर छ । यस्तोमा दलगत र स्वतन्त्र भनेर गणनामा किन फरक गर्न खोजिदैछ ?’
‘कुन कुन विचारधारा वा सम्बन्धले पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले एकजना मात्रै प्रतिनिधि छान्ने हो ? पाँच जनाले एकजना मात्रै प्रतिनिधिको छनौट गर्ने प्रकिया र बिधि के हो ? आयोगले सो किसिमको चुनावका लागि बनाएको कार्यबिधि कहाँ छ ? पक्कै पनि यसको लोकतान्त्रिक जवाफ छैन,’ उनले लेखेका छन् ।
यस्तो छ उनले लेखेको पूरा स्टाटसः– मतगणना गर्दा पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको एकजना प्रतिनिधी भन्ने कुरा आयो । सबै उम्मेदवार बराबर भनेर लोकतान्त्रिक पद्दतिको निर्वाचन भएको छ । उम्मेदवारी दिने समय होस् वा शुल्क वा प्रक्रिया, कतै पनि पार्टीगत उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारको भिन्नता सोचिएको छैन । हरेकलाई हरेकसँग प्रतिष्पर्धी मानिएको छ । हरेकले पाउने प्रत्येक मतको ’मतभार’ बराबर छ । यस्तोमा दलगत र स्वतन्त्र भनेर गणनामा किन फरक गर्न खोजिदैछ ?
५ जना स्वतन्त्रको एकजना साझा प्रतिनिधी भन्ने कुरा कानुनी, व्यवहारिक र लोकतन्त्रको कसीमा हदैसम्मको अन्यायपुर्ण छ र यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ ।
यसले विवादको सिर्जना गरेर मतगणना नै शान्तिपुर्ण हुदैन कि भन्ने शंका उत्पन्न गराउँछ । यसप्रति निर्वाचन आयोग सजग बनोस् । र, हरेक स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि आफ्नो प्रतिनिधि मतगणनामा सामेल गर्न दिओस् । यसमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण र तत्काल कार्यान्वयनका लागि अपिल गर्दछु ।
कोरिया उड्नै लागेका ८३ युवालाई ठगि गर्न खोज्ने परे श्रममन्त्रीकाे फन्दामा